प्रारम्‍भमा ख्रीष्‍टका वाणीहरू: अध्याय ७० | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
आशिष्‌को बारेमा तिमीहरूको बुझाइ कस्तो छ?
विश्‍वासीहरूले कस्तो दृष्टिकोण राख्‍नुपर्छ
सुसमाचार फैलाउने काम पनि मानिसलाई मुक्ति दिने काम नै हो
परमेश्‍वरमा साँचो रूपले विश्‍वास गर्नुको अर्थ के हो
प्रारम्‍भमा ख्रीष्‍टका वाणीहरू: अध्याय १
प्रारम्‍भमा ख्रीष्‍टका वाणीहरू: अध्याय २
प्रारम्‍भमा ख्रीष्‍टका वाणीहरू: अध्याय ३
“सहस्राब्दीय राज्यको आगमन भएको छ” भन्ने विषयमा संक्षिप्त चर्चा
प्रारम्‍भमा ख्रीष्‍टका वाणीहरू: अध्याय ५
प्रारम्‍भमा ख्रीष्‍टका वाणीहरू: अध्याय १०३
प्रारम्‍भमा ख्रीष्‍टका वाणीहरू: अध्याय १५
प्रारम्‍भमा ख्रीष्‍टका वाणीहरू: अध्याय ७०
प्रारम्‍भमा ख्रीष्‍टका वाणीहरू: अध्याय ८८
प्रारम्‍भमा ख्रीष्‍टका वाणीहरू: अध्याय १०८
प्रारम्‍भमा ख्रीष्‍टका वाणीहरू: अध्याय १२०
सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको लागि परमेश्‍वरका वचनहरू: अध्याय ४
सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको लागि परमेश्‍वरका वचनहरू: अध्याय ५
सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको लागि परमेश्‍वरका वचनहरू: अध्याय ६
सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको लागि परमेश्‍वरका वचनहरू: अध्याय ८
सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको लागि परमेश्‍वरका वचनहरू: अध्याय १०
सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको लागि परमेश्‍वरका वचनहरू: राज्यको स्तुतिगान
सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको लागि परमेश्‍वरका वचनहरू: अध्याय १२
सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको लागि परमेश्‍वरका वचनहरू: अध्याय १८
सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको लागि परमेश्‍वरका वचनहरू: अध्याय २०
सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको लागि परमेश्‍वरका वचनहरू: हे सबै मानिस हो, आनन्दित होओ!
सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको लागि परमेश्‍वरका वचनहरू: अध्याय २६
सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको लागि परमेश्‍वरका वचनहरू: अध्याय २९
सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको लागि परमेश्‍वरका वचनहरू: अध्याय ३९
सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको निम्ति परमेश्‍वरका वचनहरूका रहस्यहरूको अर्थ-अनुवादहरू: अध्याय १६
सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको निम्ति परमेश्‍वरका वचनहरूका रहस्यहरूको अर्थ-अनुवादहरू: अध्याय १८
सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको निम्ति परमेश्‍वरका वचनहरूका रहस्यहरूको अर्थ-अनुवादहरू: अध्याय २२ र २३
सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको निम्ति परमेश्‍वरका वचनहरूका रहस्यहरूको अर्थ-अनुवादहरू: अध्याय २६
धार्मिक सेवालाई शुद्ध पारिनैपर्छ
परमेश्‍वरमाथिको तेरो विश्‍वासमा तैँले परमेश्‍वरको आज्ञापालन गर्नैपर्छ
परमेश्‍वरसँग सामान्य सम्बन्ध स्थापित गर्नु अति नै महत्त्वपूर्ण छ
एक सामान्य आत्मिक जीवनले मानिसहरूलाई सही मार्गतर्फ डोर्‍याउँछ
सिद्ध पारिएकाहरूका निम्ति दिइएका प्रतिज्ञाहरू
दुष्‍टहरूलाई निश्‍चय नै दण्ड दिइनेछ
वास्तविकता कसरी थाहा पाउने
सामान्य आत्मिक जीवनको सम्‍बन्धमा
मण्डलीको जीवन र वास्तविक जीवनको बारेमा छलफल
सत्यतालाई बुझिसकेपछि त्यसलाई अभ्यास गर्नुपर्छ
मुक्ति पाउने व्यक्ति त्यो हो जो सत्यको अभ्यास गर्न इच्छुक हुन्छ
परमेश्‍वरसँग तेरो सम्बन्ध कस्तो छ?
वास्तविकतामा अझ बढी ध्यान देऊ
सत्यतालाई अभ्यास गर्नु मात्रै वास्तविकता धारण गर्नु हो
आज परमेश्‍वरको कामलाई बुझ्‍नु
के परमेश्‍वरको कार्य मानिसले सोचे झैँ सरल छ र?
तैँले परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्ने हुँदा तँ सत्यताको निम्ति जिउनुपर्छ
सात मेघगर्जनको आवाज—राज्यको सुसमाचार सारा ब्रह्माण्डभरि फैलिनेछ भन्‍ने अगमवाणी
देहधारी परमेश्‍वर र परमेश्‍वरद्वारा प्रयोग भएका मानिसहरूका बीचका अत्यावश्यक भिन्नता
अन्धकारको प्रभावदेखि उम्की, र तँ परमेश्‍वरद्वारा प्राप्त गरिन सक्नेछस्
विश्‍वासमा, व्यक्तिले वास्तविकतालाई जोड दिनुपर्छ—धार्मिक विधिविधानमा संलग्‍न हुनु विश्‍वास होइन
परमेश्‍वरप्रतिको सच्‍चा प्रेम स्वस्फूर्त हुन्छ
प्रार्थनाको अभ्यासको सम्बन्धमा
परमेश्‍वरको सबैभन्दा नयाँ कामलाई चिन र उहाँका पाइलाहरू पछ्याऊ
परमेश्‍वरको अघि आफ्नो हृदयलाई शान्त राख्ने सम्‍बन्धमा
सिद्धता हासिल गर्न परमेश्‍वरको इच्छाप्रति सचेत होऊ
राज्यको युग नै वचनको युग हो
परमेश्‍वरको वचनद्वारा सबै कुरा प्राप्त हुन्छ
परमेश्‍वरलाई साँच्‍चै प्रेम गर्नेहरू ती हुन् जो उहाँको व्यावहारिकताप्रति पूर्ण रूपमा समर्पित हुन सक्छन्
सिद्ध बनाइनुपर्नेहरू शोधनको प्रक्रियाबाट भएर जानैपर्छ (भाग एक)
सिद्ध बनाइनुपर्नेहरू शोधनको प्रक्रियाबाट भएर जानैपर्छ (भाग दुई)
कष्टपूर्ण परीक्षाहरू अनुभव गरेपछि मात्र तैँले परमेश्‍वरको प्रेमिलोपन जान्न सक्छस्
परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्नु मात्रै साँचो रूपमा परमेश्‍वरलाई विश्‍वास गर्नु हो
पत्रुसले येशूलाई कसरी चिने
शोधन अनुभव गरेपछि मात्र मानिसमा साँचो प्रेम हुन सक्छ
परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्नेहरू सदाको लागि उहाँको ज्योतिभित्र जिउनेछन्‌‌
अभ्यासमा ध्यान केन्द्रित गर्नेहरूलाई मात्र सिद्ध तुल्याउन सकिन्छ
पवित्र आत्माको काम र शैतानको काम
सत्यताको अभ्यास नगर्नेहरूलाई एउटा चेतावनी
अपरिवर्तित स्वभाव हुनु भनेको परमेश्‍वरसँगको शत्रुतामा हुनु हो
परमेश्‍वरलाई नचिन्‍ने सबै मानिसहरू परमेश्‍वरको विरोध गर्ने मानिसहरू हुन्
काम र प्रवेश (८)
परमेश्‍वरको कामको दर्शन (१)
परमेश्‍वरको कामको दर्शन (२)
परमेश्‍वरको कामको दर्शन (३) (भाग एक)
बाइबल सम्बन्धमा (१)
बाइबल सम्बन्धमा (३)
बाइबल सम्बन्धमा (४)
देहधारणको रहस्य (१)
आज्ञा पालन र सत्यता अभ्यास गर्ने
देहधारणको रहस्य (४) (भाग एक)
देहधारणको रहस्य (४) (भाग दुई)
दुई देहधारणहरूले देहधारणको महत्त्व पूरा गर्छन्
के त्रिएकत्व अस्तित्वमा छ?
विजयको कामको भित्री सत्यता (१)
विजयको कामको भित्री सत्यता (२)
विजयको कामको भित्री सत्यता (३)
इस्राएलीहरूले जस्तै सेवा गर्
पत्रुसका अनुभवहरू: सजाय र न्यायसम्‍बन्धी उनको ज्ञान: भाग एक
पत्रुसका अनुभवहरू: सजाय र न्यायसम्‍बन्धी उनको ज्ञान: भाग दुई
तिमीहरूले कामलाई बुझ्नै पर्छ—दुबिधामा नपछ्याओ!
तँ तेरो भविष्यको मिसनमा कसरी संलग्‍न हुनुपर्छ?
मानवजातिलाई व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्य
जसले सिक्दैनन् र अनजान रहन्छन्: के तिनीहरू जनावरहरू होइनन् र?
वास्तविक व्यक्ति बन्‍नुको अर्थ के हो
विश्‍वासको बारेमा तँलाई के थाहा छ?
जब झर्ने पातहरू तिनको जराहरूमा फर्कन्छन्, आफूले गरेका सबै दुष्ट कामका निम्ति तैँले पछुतो गर्नेछस्
जो देहको हो ऊ क्रोधको दिनबाट उम्कन सक्दैन
तैँले सम्पूर्ण मानवजाति वर्तमान दिनसम्म कसरी विकसित भयो भन्ने जान्‍नुपर्छ भाग एक
तैँले सम्पूर्ण मानवजाति वर्तमान दिनसम्म कसरी विकसित भयो भन्ने जान्‍नुपर्छ भाग दुई
पद र पहिचानको सम्‍बन्धमा
तैंले प्रतिष्ठाका आशिष्‌हरूलाई पन्छ्याउनुपर्छ र मानिसको निम्ति मुक्ति ल्याउने परमेश्‍वरको इच्छालाई बुझ्‍नुपर्छ
आफ्ना धारणाहरूमा परमेश्‍वरलाई सीमित गर्नेले परमेश्‍वरको प्रकाश कसरी प्राप्त गर्न सक्छ?
परमेश्‍वर र उहाँको कार्यलाई चिन्नेहरूले मात्र परमेश्‍वरलाई सन्तुष्ट पार्न सक्छन्‌
देहधारी परमेश्‍वरको सेवकाइ र मानिसको दायित्व बीचको भिन्नता
परमेश्‍वर सारा सृष्टिका प्रभु हुनुहुन्छ
तेह्र पत्रहरूमा तँ कहाँ खडा हुन्छस्?
सफलता वा असफलता मानिसले हिँड्ने मार्गमा नै निर्भर हुन्छ
परमेश्‍वरको काम र मानिसको काम (भाग एक)
परमेश्‍वरको काम र मानिसको काम (भाग दुई)
परमेश्‍वरको कामका तीन चरणहरूलाई जान्नु नै परमेश्‍वरलाई चिन्ने मार्ग हो (भाग एक)
परमेश्‍वरको कामका तीन चरणहरूलाई जान्नु नै परमेश्‍वरलाई चिन्ने मार्ग हो (भाग दुई)
भ्रष्ट मानवजाति देहधारी परमेश्‍वरको मुक्तिको अझै बढी खाँचोमा छ भाग एक
भ्रष्ट मानवजाति देहधारी परमेश्‍वरको मुक्तिको अझै बढी खाँचोमा छ भाग दुई
परमेश्‍वरद्वारा बास गरिएको देहको सार
परमेश्‍वरको कार्य र मानिसको अभ्यास भाग एक
परमेश्‍वरको कार्य र मानिसको अभ्यास भाग दुई
स्वर्गीय पिताको इच्छा पालन गर्नु नै ख्रीष्‍टको आधारभूत स्वभाव हो
मानिसको सामान्य जीवन पुनर्स्थापना गर्नु र उसलाई सुन्दर गन्तव्यमा लिएर जानु (भाग एक)
मानिसको सामान्य जीवन पुनर्स्थापना गर्नु र उसलाई सुन्दर गन्तव्यमा लिएर जानु भाग दुई
परमेश्‍वर र मानिस एकसाथ विश्राममा सँगै प्रवेश गर्नेछन् (भाग एक)
परमेश्‍वर र मानिस एकसाथ विश्राममा सँगै प्रवेश गर्नेछन् (भाग दुई)
तैँले येशूको आत्मिक शरीरलाई देख्दासम्ममा, परमेश्‍वरले स्वर्ग र पृथ्वीलाई नयाँ बनाइसक्‍नुभएको हुनेछ
ख्रीष्ट अनुरूप नभएकाहरू निश्‍चय नै परमेश्‍वरका विरोधीहरू हुन्
धेरैलाई बोलाइन्छ, तर थोरैलाई चुनिन्छ
तैँले ख्रीष्‍टसँगको अनुकूलताको मार्ग खोजी गर्नुपर्छ
के तँ परमेश्‍वरको साँचो विश्‍वासी होस्?
ख्रीष्टले सत्यताद्वारा न्यायको काम गर्नुहुन्छ
के तँलाई थाहा थियो? परमेश्‍वरले मानिसहरूको बीचमा महान् कुरा गर्नुभएको छ
आखिरी दिनहरूका ख्रीष्‍टले मात्रै मानिसलाई अनन्त जीवनको बाटो दिन सक्‍नुहुन्छ
तेरो गन्तव्यका लागि पर्याप्त असल कार्यहरू तयार गर्
तँ कोप्रति निष्ठावान् छस्?
अपराधले मानिसलाई नर्कतर्फ डोर्याउनेछ
परमेश्‍वरको स्वभाव बुझ्‍नु अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ
पृथ्वीमा हुनुहुने परमेश्‍वरलाई कसरी चिन्ने
एउटा अत्यन्तै गम्भीर समस्या: विश्‍वासघात (१)
एउटा अत्यन्तै गम्भीर समस्या: विश्‍वासघात (२)
तिमीहरूले आफ्ना कार्यहरूलाई विचार गर्नुपर्छ
परमेश्‍वर देखा पर्नुभएको घटनाले नयाँ युगलाई प्रारम्भ गरेको छ
परमेश्‍वरले सबै मानवजातिको नियतिमाथि नेतृत्व गर्नुहुन्छ
मानिसलाई परमेश्‍वरको व्यवस्थापनको बीचमा मात्रै मुक्त गरिन सकिन्छ
परमेश्‍वरलाई चिन्‍नु भनेको परमेश्‍वरको डर मान्‍नु र दुष्‍टताबाट अलग बस्‍नु हो
परमेश्‍वरको काम, परमेश्‍वरको स्वभाव र परमेश्‍वर स्वयम् २ भाग छ
परमेश्‍वरको न्याय र सजायमा उहाँ देखा पर्नुभएको घटनालाई हेर्नु
व्यावहारिक परमेश्‍वर स्वयम्‌ परमेश्‍वर हुनुहुन्छ भनी तैँले थाहा पाउनुपर्छ
उद्धारको युगको कार्यको पछाडिको वास्तविक कथा
भ्रष्ट मानिसले परमेश्‍वरलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन
परमेश्‍वरको कामको दर्शन (३) (भाग दुई)
मुक्तिदाता पहिले नै “सेतो बादल” मा फर्किसक्नुभएको छ
के तँ जीवित भएको व्यक्ति होस्?
सच्चा हृदयका साथ परमेश्‍वरको आज्ञापालन गर्नेहरूलाई अवश्य पनि परमेश्‍वरले प्राप्त गर्नुहुनेछ
परमेश्‍वरलाई चिन्‍नेहरू मात्र परमेश्‍वरको गवाही बन्‍न सक्छन्
मेरा रहस्यहरू प्रकट भएका छन् र खुला रूपमा प्रदर्शित भएका छन्, र अब लुकेका छैनन्, यो सबै पूर्ण रूपमा मेरो अनुग्रह र कृपाको कारणले भएको हो। यसबाहेक, मेरो वचन मानिसहरूमाझ देखा परेको छ, र यसलाई अब फेरि गुप्त राखिएको छैन, यो पनि मेरो अनुग्रह र कृपाको कारणले भएको हो। म ती सबैलाई प्रेम गर्दछु जसले इमानदारीसाथ आफैलाई मेरो निम्ति समर्पित गर्छन्, र आफैलाई ममा अर्पण गर्छन्। मबाट जन्मेर पनि मलाई नचिन्‍ने र मेरो विरोध समेत गर्ने सबैलाई म घृणा गर्छु। जो मेरो लागि इमानदार छ म उसलाई त्‍याग्‍नेछैनँ; बरु, म त्यो व्यक्तिका आशिषहरू दोबर गरिदिनेछु। जो अकृतज्ञ छन् र मेरो दयालाई उल्लङ्घन गर्दछन् म तिनीहरूलाई दोबर दण्ड दिनेछु, र म तिनीहरूलाई सजिलै छोड्‌नेछैनँ। मेरो राज्यमा कुनै कुटिलता वा छलकपट छैन, र कुनै सांसारिकता छैन; अर्थात्, त्यहाँ मृतकको कुनै दुर्गन्ध छैन। बरु, सबै विशुद्धता र धार्मिकता छन्; सबै शुद्धता र खुलापन छ, जसमा कुनै कुरा लुकाइएको वा गुप्त राखिएको छैन। सबै कुरा ताजा छन्, सबै थोक रमाइला छन्, र सबै थोक सुधार गर्ने किसिमका छन्। जो कसैसित अझै पनि मृतकको दुर्गन्ध छ त्यो कुनै पनि प्रकारले मेरो राज्यमा रहन सक्दैन, र यसको सट्टामा मेरो फलामको डन्डाले त्योमाथि शासन गरिनेछ। अनादिकालदेखि अहिलेको दिनसम्म सबै अन्त्यहीन रहस्यहरूलाई तिमीहरूको लागि अर्थात् आखिरी दिनहरूमा मद्वारा प्राप्त गरिने मानिसहरूको समूहको लागि पूर्ण रूपमा प्रकट गरिएको छ। के तँ आशिषित महसुस गर्दैनस्? यसको साथै, सबै कुराहरू खुल्लमखुल्ला प्रकट गरिने ती दिनहरू तिमीहरूले मेरो शासनमा साझेदारी गर्ने दिनहरू हुनेछन्।
मानिसहरूको जुन समूहले साँच्चै राजाहरूको रूपमा शासन गर्छन् तिनीहरू मेरो पूर्वनिर्धारित गन्तव्य र छनौटमा निर्भर गर्दछ, र यसमा मानवीय इच्छा रत्तीभर पनि छैन। यसमा भाग लिन हिम्मत गर्ने जोकोहीले मेरो हातको प्रहार सहनुपर्नेछ, र त्यस्ता मानिसहरू मेरो दन्किरहेको आगोमा पर्ने वस्तुहरू हुनेछन्; यो मेरो धार्मिकता र महिमाको अर्को पक्ष हो। मैले भनेको छु, म सबै कुरामाथि शासन गर्दछु, म त्यो बुद्धिमान् हुँ जसले पूर्ण अख्तियार प्रयोग गर्दछ, र म कसैप्रति दयालु छैनँ; म पूर्ण रूपमा निष्ठुर छु, व्यक्तिगत भावनाहरूबाट पूर्ण रूपमा वञ्चित छु। म जोसुकैसँग (चाहे ऊ जत्ति नै राम्ररी बोलोस्, म उसलाई छोड्ने छैनँ) मेरो धार्मिकता, शुद्धता र प्रतापद्वारा व्यवहार गर्दछु, यस अवधिमा सबैलाई मेरा कामहरूको चमत्कार देख्न सक्ने, साथै मेरा कामहरूको अर्थ बुझ्न सक्‍ने तुल्याउँछु। मैले एक-एक गरी दुष्टात्माहरूलाई तिनीहरूले गरेका हरप्रकारका कार्यहरूका लागि दण्ड दिएँ र तिनीहरू प्रत्येकलाई अतल कुण्डमा फ्याँकिदिएँ। यो काम मैले समय सुरु हुनुभन्दा अघि समाप्त गरें, तिनीहरूको निम्ति कुनै स्थिति छोडिनँ, तिनीहरूका निम्ति काम गर्ने कुनै ठाउँ छोडिनँ। मेरो चुनिएका मानिसहरू—मद्वारा पूर्वनिर्धारण गरिएकाहरू र छनौट गरिएकाहरू—कोही पनि कहिल्यै दुष्टात्माद्वारा ग्रस्त हुन सक्दैन, र त्यस्तो सट्टामा, तिनीहरू सधैँ पवित्र रहनेछन्। मैले पूर्वनिर्धारण नगरेका र नचुनेकाहरूलाई चाहिँ म शैतानको हातमा दिनेछु, र तिनीहरूलाई उप्रान्त रहन दिनेछैनँ। सबै पक्षहरूमा, मेरो प्रशासनिक आदेशहरूमा मेरो धार्मिकता र मेरो प्रताप सम्मिलित छन्। जस-जसमा शैतानले काम गर्दछ तिनीहरू एकै जनालाई पनि म छोड्‌नेछैनँ, तर तिनीहरूका सितै तिनीहरूलाई पातालमा फालिदिनेछु, किनकि म शैतानलाई घृणा गर्दछु। म कुनै पनि प्रकारले त्यसलाई सजिलै बचाउनेछैन, तर त्यसलाई आफ्नो काम गर्ने थोरै मौका समेत नदिइकन पूर्ण रूपमा नाश पार्नेछु। शैतानले केही हदसम्म भ्रष्ट बनाएका व्यक्तिहरू (अर्थात्, विपत्तिमा पर्ने मानिसहरू) मेरो आफ्नै हातको बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवस्थापन अन्तर्गत हुन्छन्। यो शैतानको उग्र क्रोधको परिणाम हो भन्ने नसोच्; यो जान् कि म सर्वशक्तिमान् हुँ, जसले ब्रह्माण्ड र सबै थोकमाथि शासन गर्छ! मैले समाधान गर्न नसक्ने समस्याहरू कुनै पनि छैन, मैले पूरा गर्न नसक्ने काम वा मैले बोल्न नसक्ने कुनै शब्द हुनु त झन् परै जाओस्। मानिसले मेरो सल्लाहकारको काम गर्नु हुँदैन। होसियार हो, मेरा हातको प्रहार परी पातालमा खस्लास्। म तँलाई भन्छु! आज मसँग ज-जसले सक्रिय रूपमा सहयोग गर्दैछन् उनीहरू बुद्धिमान् हुन्, र उनीहरू हानि हुनबाट जोगिनेछन् र न्यायको कष्टबाट बच्नेछन्। यी सबै मैले पूर्वनिर्धारण गरेका मेरा प्रबन्धहरू हुन्। आफूलाई अति नै महान् सम्झेर कुनै अविवेकी टिप्पणी नगर् र ठूला-ठूला कुराहरू नगर्। के यो सबै मेरो पूर्वनिर्धारणद्वारा भएका होइनन् र? तँ जो मेरो सल्लाहकार हुन खोज्छस्, तँलाई कुनै सरम नै छैन! तँलाई आफ्नो कद नै थाहा छैन; तँलाई के थाहा यो कति दयनीय रूपमा सानो छ! तैपनि, तँ यो कुनै ठूलो कुरा होइन भनी सोच्छस्, र आफैलाई चिन्दैनस्। बारम्बार, तँ मेरा वचनहरू सुन्न इन्कार गर्छस्, र त्यसरी मेरा कडा मेहनतहरूलाई व्यर्थ बनाउँछस् र ती मेरो अनुग्रह र दयाका अभिव्यक्ति हुन् भनी महसुस नै गर्दैनस्। बरु, तँ बारम्बार आफ्नो चलाखी देखाउने कोसिस गर्छस्। के यो कुरा तँलाई याद छ? आफूलाई त्यति चलाख ठान्ने मानिसहरूले कस्तो दण्ड पाउनुपर्छ? मेरा वचनहरूप्रति उदासीन र अविश्‍वसनीय रहने, र ती वचनहरूलाई आफ्नो हृदयमा नराख्ने, तिमीहरूले यो अनि त्यो गर्न मलाई एउटा बहानाको रूपमा प्रयोग गर्छौ। दुष्कर्मीहरू! तिमीहरू कहिले मेरो हृदयलाई पूर्ण रूपमा विचार गर्न सक्ने हुनेछौ? तिमीहरू यसबारेमा कुनै विचार नै गर्दैनौ, त्यसैले तिमीहरू “दुष्कर्मीहरू” भन्नु तिमीहरूलाई दुर्व्यवहार गर्नु होइन। यो तिमीहरूलाई एकदमै सुहाउँछ!
कुनै बेला लुकेर रहेका कुराहरूलाई एक-एक गरी आज म तिमीहरूलाई देखाउँदैछु। त्यो ठूलो रातो अजिङ्गर अतल कुण्डमा फालिएको छ र पूर्ण रूपमा नाश पारिएको छ, किनकि त्यसलाई राख्नु कुनै फाइदा छैन; यसको अर्थ, त्यसले ख्रीष्टको सेवा गर्न सक्दैन। यस दिनपछि, राता चीजहरूको कुनै अस्तित्व रहनेछैन; तिनीहरू खिइँदै बिस्तारै नाश हुनेछन्। म जे भन्छु त्यो गर्छु; यो मेरो कामको पूर्णता हो। मानवीय धारणाहरूलाई फाल्; मैले भनेका सबै कुरा मैले गरेको छु। जसले चतुर हुने कोसिस गर्छ उसले आफैमाथि विनाश र घृणा ल्याउँछ, र ऊ जिउन चाहँदैन। त्यसकारण, म तँलाई सन्तुष्ट पार्नेछु, र निश्चित रूपमा त्यस्ता मानिसहरूलाई राख्नेछैन। अबउप्रान्त जनसङ्ख्या सर्वोत्तम रूपमा वृद्धि हुनेछ, तर मसँग सक्रिय सहकार्य नगर्ने सबैलाई बढारेर शून्यतामा पुर्‍याइनेछ। मैले स्वीकृति दिएका व्यक्तिहरू तिनीहरू हुन् जसलाई म सिद्ध पार्नेछु, र म तिनीहरूमध्ये एक जनालाई पनि फाल्नेछैन। मैले भनेको कुरामा कुनै विरोधाभासहरू छैनन्। जसले मसँग सक्रिय सहकार्य गर्दैनन् तिनीहरूले अझ बढी सजाय भोग्नुपर्नेछ, तैपनि अन्त्यमा, म तिनीहरूलाई अवश्य नै मुक्ति दिनेछु। तैपनि त्यतिन्जेलसम्ममा, तिनीहरूको जीवनको हद अति नै फरक हुनेछ। के तँ त्यस्तो व्यक्ति बन्न चाहन्छस्? उठ् र मसँग सहकार्य गर्! मेरो लागि आफूलाई अर्पित गर्नेहरूसित निश्चय पनि म तुच्छ व्यवहार गर्नेछैन। ज-जसले गम्भीरतासाथ आफैलाई ममा समर्पण गर्छन् तिनीहरूलाई म मेरा सबै आशिष्‌हरू प्रदान गर्नेछु। आफैलाई पूर्ण रूपमा ममा अर्पण गर्! तँ जे खान्छस्, तँ जे लगाउँछस्, र तेरो भविष्य सबै मेरो हातमा छ; म सबै कुराको उचित व्यवस्था गर्नेछु ताकि तैँले अनन्त आनन्द पाउन सक्, जुन तैँले प्रयोग गरेर कहिल्यै समाप्त गर्न सक्नेछैनस्। किनकि मैले भनेको छु, “मेरो लागि इमानदारपूर्वक खर्चिनेहरूलाई म अवश्य नै धेरै आशिष्‌ दिनेछु।” मेरो निम्ति आफैलाई इमानदारीसाथ अर्पण गर्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई सबै आशिष्‌हरू प्राप्त हुनेछन्।
परमेश्‍वरको वचन | “परमेश्‍वर सारा सृष्टिका प्रभु हुनुहुन्छ”
परमेश्‍वरको वचन | “नयाँ युगका आज्ञाहरू”
परमेश्‍वरको वचन | “प्रारम्‍भमा ख्रीष्‍टका वाणीहरू अध्याय अध्याय १५”
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू | “दुष्‍टहरूलाई निश्‍चय नै दण्ड दिइनेछ”